खोकीको समस्यामा आयुर्वेदिक औषधि असुरो धेरै नै उपयोगी
असुरोबाट खोकी, रूघा, दम जस्ता रोग निको बनाउन सकिने देखिन्छ
58850 पटक पढिएको
खोकीको समस्यामा आयुर्वेदिक औषधि असुरो धेरै नै उपयोगी ! आजकाल प्राय: जसोलाई खोकी लाग्ने गरेको पाइन्छ। विशेषगरी बच्चाहरुमा यो बढी देखिएको छ। खोकी लाग्नुका प्रमुख कारण धुलोका कण मुख र नाकको माध्यमबाट भित्र पस्नाले प्राय: खोकी लाग्ने गरेको देखिएको छ । खोकीलाई सामान्य रूपमा हेर्दा यसले ठूला रोग ननिम्ताउला भन्न सकिँदैन ।
‘लडाइको जड हासी, रोगको जड खासी’ भन्ने यो उखानले बताउने गरेको पाइन्छ । आजकल बजारमा पाइने अधिकांश खोकीका औषधिले खोकी ठिक नभएको जनगुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ । आजको लेखमा मैले खोकी कसरी ठिक हुन सक्छ भन्ने कुरामा विशेष सुत्र पेश गर्नेछु ।
हाम्रो गाउँघरमा यस्ता चमत्कारिक औषधि छन् तर प्रयोग गर्न हामीलाई फुर्सद नै छैन । मेडिकलमा गयो जस्तो पायो उस्तै औषधि माग्यो खान दियो पुग्यो नत डाक्टरको परामर्श लिनुछ नत के कारणले खोकी लागेको जानकारी नै प्राप्त गर्नुछ ।
खोकी लाग्दा गलामा खस-खस गरेर लाग्ने हुन्छ । लामो समय खोकीको उपचार नभएमा यसले कालान्तरमा गएर टिबी, दमको रोग, निमोनिया निम्ताउन सक्ने खतरा बढ्ने देखिएको छ । खोकीका कारण मानिसले धेरै समयसम्म समेत दु:ख पाउँछन् । कुनै-कुनै खोकी त करिब १ महिना भन्दा बढीसम्म समेत लाग्ने हुन्छ । खोकी लागेमा घरेलु उपचारले पनि खोकी निको गर्न सकिन्छ ।
खोकीको उपचारमा प्रयोग हुने जडिबुटीलाई प्रयोग गरेर पनि खोकी निको बनाउन सकिने देखिन्छ । यस्ता जडिबुटीमध्ये असुरोलाई प्रमुख खोकीको रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । असुरोलाई नचिन्ने कोही छैन । असुरो बारमा लगाएको देखिन्छ । आजको लेखमा मैले असुरोको औषधि बनाउने तरिका दिन लागेको छु । फाइदा उठाउन आग्रह गर्दछु ।
असुरोबाट खोकी, रूघा, दम जस्ता रोग निको बनाउन सकिने देखिन्छ । यस्ता औषधि भारतीय कम्पनीले औषधि बनाएर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । हामीले पनि यसवाट आफै औषधि बनाएर सेवन गर्ने तरिका जान्न सकेमा खोकीको औषधि बनाएर सेवन गर्न सकिनेछ ।
असुरोबाट औषधि बनाउने तरिका यस्तो छ जानौं
१. असुरोको पात ल्याउनुहोस् । पातलाई धुनुहोस् र कपडामा लपेटनुहोस् । माथिबाट कपडमिटिले पोत्नुहोस् र भुग्रामा दवाउनुस र तयार भएपछि निकालेर १ चमच उमेर अनुसार थोरै मह राखेर दिनमा ३ पटक खानुस सवै ठिक हुन्छ ।
२. सुकेको असुरोको पातलाई सुकाएर बिडी जस्तै तान्नुहोस् खोकी निको हुन्छ ।
३. असुरोबाट बनेको औषधि डाबर कम्पनीले बनाएर बजारमा ल्याएको छ । वासावलेह १ चमच मनतातो पानीसंग दिनमा ३ पटक खाएमा रक्तपित्त र खोकी निको बनाउदछ ।
४. असुरोको पात ४,५ वटा ल्याएर आगोमा सेक्नुस र रस निकाल्नुस निकालेको रसमा मह, अदुवाको रस मिलाएर चाट्नुस ठिक हुन्छ ।
५. १० ग्राम अदुवाको रस, असुराको पातको रसमा महसँग मिसाएर चाटे लाभ हुन्छ । यस्तै, मिश्रीमा अदुवा पोलेर मिलाएर चुसेमा पनि खोकी निको हुन्छ ।